Ukuba ukuNtengiso okanye ukuThengisa, Zivuselele ngoku! | Martech Zone
Ukuba ukuNtengiso okanye ukuThengisa, Zivuselele ngoku!
NgoLwesithathu, Septemba 24, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Yenzeka veki nganye. Ndifumana i-imeyile evela kumthengisi okanye kwithemba kwaye sisebenza kunye nomhla wokuthetha. Ndijonge indawo yabo kwaye ndibone ukuba ayilunganga na. Ndinokudibanisa nabo LinkedIn ukufunda okungakumbi malunga nabo. Umhla usetiwe, isimemo sekhalenda samkelwe kwaye ndiya phambili.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye isilumkiso siphuma nomntu. Andilazi igama, ke ndiye ndikhangele i-domain evela kwidilesi ye-imeyile. Ukuba ndinethamsanqa, yinkampani yabo. Ukuba andikho, ndijijekile. Ndijonge indawo yabo kwaye ibaleka inkumbulo yam kwaye ngoku ndiye ndafumanisa ukuba ngoobani kwaye bafuna ntoni. Ukuba ndinethamsanqa.
Andinayo inkumbulo elungileyo (yisayensi!) Ke ndifuna imikhondo enje. Ngamanye amaxesha ndibhala amanqaku e-Evernote, ngamanye amaxesha kumsitho wekhalenda, ngamanye amaxesha ndiyathemba ukuba ndiyakukhumbula… kodwa andikukhumbuli. Kumatyeli anqabileyo umntu uhamba e-ofisini yam kwaye andinalo nofifi lokuba bangoobani okanye kutheni bekhona ngoko ndidlala umdaniso… babuze malunga nokuba basebenza ngantoni, zihamba njani izinto, njl. zama ukugijima kwimemori yam.
Ekugqibeleni lukhona unyango! Vuselela Sisoftware kunye nesicelo sewebhu esikuvumela ukuba ukhangele umntu kwaye ufumane imbonakalo yeprofayile yabo kunye nalo naluphi na unxibelelwano onokuba nalo nabo-nokuba kunge-imeyile okanye intlalo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, isicelo siza kunye nezilumkiso zangaphambili kunye neposi. Unentlanganiso kwimizuzu eli-15? Uya kufumana inqaku elikuxelela ukuba ngubani, okokugqibela ukuthetha ngaye, kwaye ikuvumela ukuba wenze amanqaku malunga nabo. Sisiseko solwazi kubantu abafana nam abanobunzima bokukhumbula nabani na ngaphandle kwenja yabo (Gambino).
Kumnandi. Intle. Iyasebenza. Bhalisa ngoku kwaye ungadibanisa iiakhawunti zakho ze-imeyile, iiakhawunti zakho zentlalo kunye ne-Evernote.
Ndiza kujongeka ndingenantloni kakhulu kwixesha elizayo xa ucwangcisa intlanganiso nam!
Uhlaziyo: Ukuhlaziya i-Salesforce Iphehlelelwe!
Kuhle ukubona i-Refresh idibanise isisombululo sabo ngqo kwi-Salesforce, isixhobo esimnandi sabathengisi ukufikelela kulwazi kwizikhokelo zabo, amaqabane kunye nabathengi.
tags: khangela abantuLinkedInJonga phezuluurhweboigamawomnathaabantuhlaziya kwakhonauvuselele usetyenzisohlaziya.ioUkunika amandla ukuthengisaukuthengisausetyenziso lwabathengisiinethiwekhi yokuncokolajonga abantu
Abathengisi Lumkela: Iindlela eziThengwa kwi-Intanethi ziyakhawulezisa
Sep 27, 2014 kwi-11: 21 AM
Kuvakala kupholile. Ndizamile ukungena ngemvume (ukwenza kunye neakhawunti) amatyeli aliqela kwaye iqhubeka nokusilela.
Ndicinga ukuba zingama-99% eselula.